Music » နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ့်ခြောက် – ဆောင်းဦးလှိုင် (မေမေ) “မွေးနေ့ဆုတောင်း”	17
မြစပဲရိုး says: . ဒါနောက်ဆုံး နဲ့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဆို
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .နိုင်မှာပါ အမလတ်ရေ။ ဘာပြောပြော ဘာလုပ်လုပ် ဒီနေရာမှာ ဂိတ်ဆုံးတဲ့ အမလတ် ပျော်ရမှာပါ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီဘဝ ရဲ့
kai says: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော်တော်ကြာ.. ဒေါ်စုအကျယ်ချုပ်ကျနေတုံးကတော့.. ဒီလိုနေ့မျိုး.. ကျုပ်တို့တွေအလုပ်များခဲ့ကြသပေါ့..။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သူ သမ္မတ မဖြစ်အောင် အသေအလဲ ကာကွယ်ကြတာကတော့
Ma Ei says: မေမေ
လုံမလေးမွန်မွန် says: သူ့အကြောင်းကို သေသေချာချာလိုက်ဖတ်ဖြစ်တာ သိပ်မကြာသေးဘူးရယ်… အဲဒီမကြာသေးတဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို့ ခေါ်ရာကနေ အမေစု ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရင်ထဲက ခေါ်ဖြစ်သွားတယ်… ကျန်းမာပါစေ အမေစု…
လုံမလေးမွန်မွန် says: Happy Birthday ပါအမေ ။
Courage says: တစ်ခါတစ်လေ ပြောစရာတွေ အရမ်းများနေရင် ဘာလို့မထွက်ဖြစ်တတ်တာမို့
padonmar says: သူ့ကိုချစ်ရင် သူ့စကားနားထောင်ကြရပါမယ်။
(မဲသွားမပေးနေတော့ပါဘူး၊နိုင်မှာပါပဲ ဆိုတဲ့လူကိုလည်း ဒီတမဲလေးဟာ အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သွားနိုင်လို့ ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ …ဘယ်သူ့ကိုလဲဆိုတော့
Ma Ma says: ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကလည်း ဘာမှရှိတာမဟုတ်တော့ …
မဲထည့်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်တာဝန်လေးကျေအောင် ကြိုးစားလိုက်ပါမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
Alinsett @ Maung Thura says: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက် ( ၇၀ ) ပြည့်မွေးနေ့တွင် ပြည်သူလူထုသို့ ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း
19 June 2015 “အသက် (၇၀)ဆိုတော့ နောင်ကျွန်မတို့ နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် နှစ်(၂၀)လောက် နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင် အင်မတန်အသက်ရှည်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒီ နောင်နေနိုင်မယ့် နှစ်(၂၀)လောက်အတွင်းမှာ ဒီနိုင်ငံ တိုးတက်တာ၊ ဖွံ့ဖြိုးတာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေဟာတကယ့် ကို ကမ္ဘာကနေပြီးတော့ လေးစားရမယ့်၊ တန်ဖိုးထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တာကို ကျွန်မတို့ မြင်တွေ့သွားချင်ပါတယ်။…”
မြစပဲရိုး says: ဝင်ပြီး အားပေးကြသော
Courage says: တစ်နေ့က FBမှာ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသေချာဘူး။ မဘသဆရာတော်တွေက ရွေးကောက်ပွဲဝင် အမတ်တွေကြောင်း လိုက်ပြီး ဟောပြောမယ်တဲ့။
အောင် မိုးသူ says: မေမေ
aye.kk says: အမနိုင်မှဖြစ်မှာ….၊
manawphyulay says: ရထားက မမှီတာမဟုတ်ပါဘူး။ ထွက်ချိန်ကို မမှန်တာပါ…. (အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် ကိုယ်တွေ့) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.